ISkyWest inyakaza ukwenza iDelta Airlines ijabule
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » ISkyWest inyakaza ukwenza iDelta Airlines ijabule
Airlines • Airport • Izindaba ZaseBrazil • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
ISkyWest Ithenga amaJetti amasha we-Embraer ayi-16 weDelta Air Network
I-E175 ingumgogodla wemakethe yesifunda saseNyakatho Melika, futhi njengoba imboni iqala ukuphuma kulo bhubhane sibona isidingo esikhulayo sesikhathi eside sezindiza ezinamalungelo sokuletha ukuxhumana kwasekhaya okunenzuzo.
U-Embraer uvumile ukuthengiswa kwezindiza ezingama-16 ezintsha ze-E175 kwaSkyWest, Inc futhi waveza isizinda.
Le ndiza eyizihlalo ezingama-76 izohanjiswa nge-livery yaseDelta futhi izoba nokuhlelwa okuyizigaba ezintathu.
ISkyWest isivele isebenza ngamajethi angama-71 E175 eDelta Air Lines.
I-E175 ibilokhu iyindlela yokuphila kubathwali njengoba ikulungele ngokuphelele ukwakha kabusha imizila, ukwengeza amaza, nokwengeza amandla okwengeza ukuhlangabezana nezidingo zasekhaya ezikhulayo.
Embraer uvumile ukuthengiswa kwamajethi amasha we-E16 ayi-175 ku Inkampani SkyWest, Inc. ukusebenza ku Delta Air Lines inethiwekhi, engeza kuma-jets angama-71 E175 iSkyWest asevele asebenzela iDelta Air Lines.
Indiza ye-E175 izondiza kuphela neDelta ngaphansi kweCapacity Purchase Agreement (CPA).
Inani lenkontileka, elizofakwa ku-Embraer's quarter quarter backlog, liyi-USD 798.4 million, ngokuya ngentengo yohlu.
Le ndiza eyizihlalo ezingama-76 izohanjiswa nge-livery yaseDelta futhi izoba nokuhlelwa okuyizigaba ezintathu. Ukudiliva kuqala maphakathi no-2022.
UMongameli kanye ne-CEO ye I-SkyWest, IChip Childs, ithe, “ISkyWest isebenza ngama-E175s kunanoma iyiphi enye inkampani emhlabeni. Ngalezi zindiza, sizoba cishe nama-240 E175s asebenza nezindiza eNyakatho Melika. Kule nyanga siyaziqhenya ngokufinyelela emahoreni amabili endiza ku-E175. Amakhasimende ethu ayayithanda i-E175, futhi sinokuzethemba okukhulu futhi siyakwazisa ukusebenzisana kwethu ne-Embraer. ”
UMark Neely, Ukuthengisa Kwe-VP Nokumaketha, AmaMelika, Embraer ICommercial Aviation, ithe, “Ukubambisana kwethu okuhle neSkyWest kuyaqhubeka nalolu hlelo olusha lweDelta. I-E175 ingumgogodla wemakethe yesifunda saseNyakatho Melika, futhi njengoba imboni iqala ukuphuma kulo bhubhane sibona isidingo esikhulayo sesikhathi eside sezindiza ezinamalungelo sokuletha ukuxhumana kwekhaya okunenzuzo. I-E175 ibilokhu iyindlela yokuphila kubathwali njengoba ikulungele ngokuphelele ukwakha imizila, ukwengeza amaza, nokwengeza amandla okwengeza ukuhlangabezana nezidingo zasekhaya ezikhulayo. ”
Imikhawulo Emisha Yezokuvakasha yase-UK? I-WTTC ikhala izinsimbi ze-alamu
Izinkinga Zokuvakasha Nokubuyiselwa Kwendawo: Okusha Kumele...
Izindiza zaseGeneva eziya eNew York ku-SWISS nase-United ...
Izindiza ezintsha ze-shuttle phakathi kwe-Newark Liberty ne-Reagan...
Ukufa Kwezidakamizwa Kufike Esilinganisweni Esisha: 100,000 Esikhathini Esidlule...
Ukufa kwe-COVID-10 eRussia ngoSepthemba kuphindwe kabili…
Isheduli entsha yendiza yeSouth African Airlines: Izinguquko...
Vaccine über alles: Izitolo eHesse yaseJalimane ...
ISpain izohlala ishisa ngo-2022
Isitimela esisha eshibhile esivela eLondon siye e-Edinburgh
I-Black Enterprise izosingatha i-Women of Power Tech
Kumenyezelwe Abawine Imiklomelo Yezokuvakasha Ebhekele I-WTM
Ungavakashela kanjani eCambodia futhi?
Izindiza ezingama-47 osukwini olulodwa lwe-Montego Bay
Umthetho omusha we-EU uzovimbela izivakashi ezingagonyiwe ezivela ngaphandle kwe-bloc November 25, 2021
Isiphakamiso seKhomishana sizodinga ukusulwa nguMkhandlu WaseYurophu, futhi uma siphasisiwe sizosebenza kuwo wonke amazwe e-EU ngaphandle kwe-Ireland, engeyona ilungu le-Schengen Area engenamngcele.